I-RPG ye-retro enemfazwe esekwe ekujikeni uya kudibana nee-Infinite Knights | Androidsis
I-Infinite Knights yi-RPG ene-based-based combat enokuthinta okhethekileyo ngokubonakalayo njengoko iyi-retro. Oko kukuthi, ukuba uthanda imidlalo enobugcisa obuninzi be-pixel, ngesihloko esitsha se-Android unethamsanqa. Kananjalo ayiphosi isandi esincinci esiya kusikhumbuza loo midlalo isusela kwii-80s.
I-RPG yokulwa esekwe ekujikeni apho kuya kufuneka sixhobise ngezixhobo ze- inani elikhulu lamajoni ngubani oza kuba kwicala lethu. Ibali lisisa kulowo uya kuba nakho ukuphakamisa ikrele elenziwe phantse ngentsimbi kwisiqwenga somhlaba. Ewe, Excalibur, kodwa kuguqulelo oluncinci ngeendlela zonke.
1 Yiba nguKumkani kwiiKnights ezingapheliyo
2 Yenyuka uye kumgangatho wama-500 ukutshabalalisa uKumkani weDemon
3 Uluntu oluninzi
Yiba nguKumkani kwiiKnights ezingapheliyo
Kwii-Infinite Knights siyakuba ngabo baya kuba njalobayakwazi ukurhola ikrele kwelo litye likhulu edityaniswe kuyo ixesha elithile. Eli krele liza kusivumela ukuba sithathe amandla kwaye sifumane inani elikhulu lamajoni aza kwenza konke okusemandleni awo ukuba aphumelele uloyiso kuzo zonke iintlobo zezilo neentshaba.
Oko kukuthi, kuya kufuneka hamba utshabalalisa zonke iintlobo zezilo ukufumana igolide eyoneleyo yokuvula amajoni amatsha kunye nezo ndawo siza kuthi sizenzele indawo kwiqela lethu. Kuya kufuneka sibaphucule ngoqeqesho olwahlukileyo, nanjengokuba kunjalo kwimeko ephambili yomdlalo obizwa ngokuba yi-Infinite Knights.
I-Infinite Knights ayizukufumanisa nantoni na kule midlalo yokulwa isekwe kwi-RPG, kodwa isimahla, ukuba Umxholo olungileyo kunye nobugcisa be-pixel, yenze ibe nomtsalane ngokwaneleyo ukuba siyidlale kangangeentsuku.
Yenyuka uye kumgangatho wama-500 ukutshabalalisa uKumkani weDemon
Injongo yee-Knights ezingapheliyo kukuya kuwo wonke loo mgangatho, unama-500 ubuninzi, ukuze sizifumane nomphathi omkhulu wokugqibela ukuba wonke umntu uyoyika. Ukufezekisa oku sinokukwenza ngesandla okanye ngokuzenzekelayo. Eyokuqala kukusebenzisa izakhono ezahlukeneyo ukuphelisa iintshaba. Nangona sicebisa ukuba usebenzise i-othomathikhi ukudlula ezona ntshaba zixhaphakileyo nezilula.
Kuya kufuneka sazi ukuba siwawasebenzisa njani amandla eqela lethu liphela ngobuchule babo obahlukeneyo kuloo nto ifomathi yesandla yabaphathi bokugqibela ukuba siya kudibana. Ke ngee-Infinite Knights sijamelene ne-RPG yokulwa esekwe ekujikeni apho kuya kufuneka sisebenzise isixa esikhulu segolide kunye noluntu oluninzi ukuze siqhubeke nokuqhubela phambili.
Yonke into ixabisa igolide kumdlalo, ke kuya kufuneka uzixhase ngomonde omncinci ukuze uqhubeke uye phambili. Siza kuba namaxesha ama-3 Ngosuku ukuze sikwazi ukusebenzisa intengiso ukuvuselela iqela lethu. Oku kuyakusivumela ukuba siqhubeke nokuqhubela phambili ngokukhawuleza, nangona sikwinqanaba eliphezulu, kokukhona kuya kusibiza ngaphezulu ukuqeqesha iqela lethu.
Njengoko kuyakufuneka sisebenzise intengiso kwii-Infinite Knights ukuze siphucule, ekugqibeleni sishiyeke neliphi ixesha lexesha eliza kusetyenziswa ukubona iintengiso. Iyasinda kwaye isusa kancinci kumatshini womdlalookanye ezinikezelwa yile RPG yokulwa esekwe ekujikeni. Akukho nto iseleyo ngaphandle kokuyinyamezela, kuba sikwixesha apho i-freemium ikhona ngaphandle kokubonakala ngathi iyanyamalala.
Ngokobuchwephesha ibhalwe kakuhle ngaphandle kwento eme phandle. Ewe singabeka ugcino kuyilo lwabalinganiswa, kodwa ngaphaya kolu chukumiso olubonakalayo, lonke uphuhliso lwenziwe ngokwaneleyo ukuba lubonelele ngamava amnandi okudlala. Siyakubethelela kwakhona ukupapashwa, ke masikuyeke uzame ukuze uthathe isigqibo sokuba kufanelekile ukuba ubhengezwe.
I-Infinite Knights yi-RPG yokulwa esekwe ekujikeni ene-pixel art twist Oko kusisa phambi kwenani elikhulu leentshaba ukutshabalalisa, ukuphucula izixhobo zethu kunye nenjongo yokutshabalalisa uKumkani weDemon. Unayo yasimahla kwiVidiyo kaGoogle. Sikushiya ne enkulu RPG.
Uhlobo lwakho olubonakalayo
I-Infinite Knights-Idle RPG
Umthuthukisi: I-Lemon Jam Studio
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Infinite Knights yi-RPG ene-based-based combat yokulwa ixesha elifanelekileyo